आज २०७९ असार ९ गते बिहीबार, के भन्छ तपाईँको राशिले ? « MNTVONLINE.COM
आज २०७९ असार ९ गते बिहीबार, के भन्छ तपाईँको राशिले ?
आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। मानव निर्मित भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाइने तथा विलासी जीवन व्यातित गरी रमाउने समय रहेको छ। जीवनसाथीसँग रमाईलो यात्रा तय गर्न सकिनेछ भने एकल तथा साझेदारी व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ। तरपनि सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने थोरै मिहिनेतले प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ। वादविवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईंकै जित हुने तथा शत्रु परास्त हुनेछन्। न्यायलयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा हुनेछन्। प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। पुरानो रोग तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हल भएर जानेछ। विद्यामा गरेको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल पाइने योग रहेको छ।
प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसरहरु प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। स्कूल कलेज, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ। शेयर बजार तथा सट्टाको व्यवसायमा विशेष लाभ लिन सकिनेछ। माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्नाले सम्बन्ध सुदृढड हुनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा विलाशी वस्तुको उपयोगमार्फत् मनग्ने धन संग्रह गर्न सकिनेछ।
सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला, प्रतिस्पर्धाहरुले तपाईंको साख गिराउन खोज्नेछन्। खोज तथा अनुसन्धानमा दिइएको समयबाट भनेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन मुस्किल रहेकोछ। घर जग्गा तथा स्थाई सम्पतिमा विवाद आउने योग रहेको छ भने आमा वा आफन्तसँग टाढिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा, मन खिन्न हुनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले जनतासँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला, समय मध्ययम रहेको छ।
पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउनेछ। सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन्। दाजुभाइ तथा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ। छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुन सक्छ। उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। लेखन कला तथा साहित्य जस्ता क्षेत्रमा झुकाव बढ्नेछ।
बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलीकै भरमा कामहरु हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा तपाईंको निर्णयको उच्च कदर हुनेछ। आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु तपाईंको कामदेखि खुसी हुनेछन्। पारिवारिक माहोलमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ।
समय र परिस्थितीको राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम कामहरु थालनी गर्नुहोला, अरुको सल्लाह तथा सुझाव मान्दा व्यापार व्यवसायमा लगानी फस्ने योग रहेको छ। राजनीति तथा समाजसेवामा कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा यथास्थानमा राख्न हम्मे हम्मे पर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। घरपरिवार तथा आफन्तजनसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ। खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ। लामो दुरीको विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने विदेशमा बसेर समय खर्चिनेहरुले प्रशस्त रुपैयाँपैसा कमाउन सक्नेछन्। पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले अन्य दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ। मायाप्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि भने समय मध्यम रहेको छ। अग्रज तथा आफन्तको सुझावलाई मान्दै अगाडि बढे चाहेको गन्तव्य पहिल्याउन सकिनेछ।
सरकारी तथा पैत्रिक धन सम्पत्ति हात लागी हुने सम्भावना रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडी बढ्न सकिनेछ। इच्छा आकांक्षा तथा मनोकामना पूरा हुने समय रहेको छ। दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुने हुनाले दैनिकी सहज मार्गमा अगाडी बढ्नेछ। सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लाभ हुने योग रहेको छ।
गीत सङ्गीतमा रुची बढ्ने हुँदा केही समय रमाईलो तिर पनि समय खर्च हुनेछ। समयको गती सँगै अगाडि बढ्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ। आज गरिएको लगानी फस्टाएर जाने हुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ। नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने समयले रोजगार दिलाउने तथा कामका बढुवा हुने योग रहेको छ। पढाइ लेखाइमा तपाईंको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ। माता पिताको सहयोगले राम्रा काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ।
आफूले पाएको अधिकारलाई भरपुर प्रयोग गरी उपलब्धिमूलक कामहरु गर्न सकिनेछ। लामो दुरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा तय गर्न सकिनेछ। धार्मिक स्थलको भ्रमण हुनेछ भने आफ्नो संस्कार तथा रितिरिवाज जोगाउन समय लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन खुसी रहनेछ।
हतार गर्ने बानीले अनावश्यक विवादमा फस्ने योग रहेको छ। पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा पछि परेको भान हुनेछ भने काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला, काममा बाधा तथा दुख दिनेहरु सक्रिय हुनेछन्। मान तथा सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ, काम गर्दा ध्यान लिनुहोला। व्यवसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। आफ्ना कमजोरीहरु भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहोला, अरुले आलोचना गर्न सक्छन्।
श्री पशुपति नाथको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आज २०७९ असार २० गते सोमबारको राशीफल
आज २०७९ असार महिनाको १९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
शनिदेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आज २०७९ साल असार १८ गते शनिबारको राशीफल
श्री संतोषी माताको दर्शन गर्दै हेर्नुस् आज २०७९ असार १७ गते शुक्रबारको राशीफल
आज २०७९ असार १६ गते बिहीबार, के भन्छ तपाईँको राशिले ?